၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (7 of 8) – Dhamma Training Center
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (7 of 8)
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (7 of 8) zawgyi
၂၉။ ဂါထာ သုံးပုဒ်အတွက် ဆောင်ပုဒ်
(၁) လမ်းဖြောင့်မည်တွင်၊ ထိုမဂ်ပင်၊ ရပ်ခွင်ဘေးမဲ့ နိဗ္ဗာန်ပါ။
(၂) လုံ့လနှစ်လီ၊ ဘီးတပ်သည်၊ မမြည်ရထား ထိုမဂ်ပါ။
(၃) ရှက်ကြောက်နှစ်တန်၊ နောက်မှီခံ၊ ကာရံ အမှတ်သတိပါ။
(၄) ၀ိပသ်ရှေ့သွား၊ မဂ်ဉာဏ်ကား၊ ရထားမောင်းသူ ဆိုရပါ။
(၅) ဤလိုရထား၊ ရှိသူများ ယောကျာ်း မိန်းမ လူတိုင်းမှာ။
(၆) မဂ္ဂင်ယာဉ်ကြီး၊ ငြိမ့်ငြိမ့်စီး၊ အပြီးနိဗ္ဗာန် ဆိုက်ရောက်ပါ။
အဲဒီ ဂါထာ ၃-ပုဒ်တရားကို ဟောပြီးတော့ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း ပြတော်မူပါသေးတယ်တဲ့။ အဲဒီ သစ္စာလေးပါးသိပုံကိုတော့ မဂ္ဂသစ္စာပိုင်းကျမှ ထပ်ပြီးပြောရမယ်။ သမဏနတ်သားဟာ အဲဒီ တရားကိုနာရင်း ရှေးဘ၀က သူနှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့တရားကို ပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းတယ်။ ရဟန်းဘ၀တုန်းက အပြင်းအထန် ကြာမြင့်စွာ နှလုံးသွင်းအားထုတ်လို့ တရားထူးကို မရနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နတ်ဘ၀ကျတော့ နတ်ရုပ်တွေက သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ အတွက် တခဏချင်းပဲ ၀ိပဿနာဉာဏ်တွေ အစဉ်အတိုင်းတက် ပြီးတော့ သောတာပတ္တိမဂ်ဖိုလ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုပြီး သောတာပန် ဖြစ်သွားပါသတဲ့။ (သံ-ဋ္ဌ၊ ပ-၈၀-၈၃)
ဒီ သမဏနတ်သားဝတ္ထုမှာ သိစေလိုရင်းကတော့ ၀ိပဿနာအလုပ်ကို အပြင်းအထန် အားထုတ် နေသော်လည်း တဏှာကင်းစေနိုင်တဲ့ အရိယမဂ်ဉာဏ်ကို မရသေးတဲ့အတွက် သေသည်၏အခြားမဲ့မှာ သမုဒယ သစ္စာဆိုတဲ့ တဏှာက နတ်ဘ၀ကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ သိစေလိုရင်းပါပဲ။ ဒိပြင် ဒီဝတ္ထုထဲမှာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ပွားစေပုံနှင့် နတ်ဘ၀ကျတော့ အလွယ်တကူနဲ့ တရားထူးရသွားပုံဟာလည်း အထူးသတိ ပြုဖို့ရာပါပဲ။
ကျမ်းညွှန်း– မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး၏ ဓမ္မစကြာတရာတော်
“ဇီဝိတံ ဗျာဓိကာလော စ ၊ ဒေဟ နိက္ခေပနံ ဂတိ” မသိနိုင်တာအများကြီး ရှိတယ်။
ကိုယ်အသက် ဇီဝိတ ဘယ်လောက်နေရမလဲ – မသိပါ။
ဗျာဓိ ဘာရောဂါဖြစ်လာမလဲ – မသိပါ။
ဒေဟ နိက္ခေပနံ ကိုယ်ရုပ်ကလာပ် စွန့်ပစ်မယ့်သုသာန်ကဘယ်ဟာလဲ – မသိပါ။
လားရောက်ရမယ့် ဂတိ – မသိပါ။
၃၁။ သီလသည် သမာဓိနှင့်ပညာ ဖြစ်ရေး၌ ပဓာန
သာသနေ ကုလပုတ္တာနံယ ပတိဋ္ဌာ နတ္ထိ ယံ ဝိနာ၊
အာနိသံသပရိစ္ဆေဒံယ တဿ သီလဿ ကော ဝဒေ။
သာသနာတော်၌ ကောင်းကျိုးလိုလား အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့အတွက် သမာဓိနှင့်ပညာ ဖြစ်ထွန်းရေး၌ သီလကို ကြဉ်ဖယ်ထား၍မဖြစ်၊ သီလသည် သမာဓိ ပညာ ဖြစ်ပေါ်ရေး၌ အခြေခံ ပဓာနထောက်တည်ရာ ဖြစ်သည်။ (ညွှန်း ဝိသုဒ္ဓမဂ် တွဲ-၁ နှာ ၁၀)
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မိဘကို လုပ်ကျွေးသည့် မထေရ်တစ်ပါးကို အကြောင်းပြု၍ ဤဇာတ်တော်ကို ဟောတော်မူပါသည်။ ဗာရာဏသီပြည်၌ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီးမင်းပြုစဉ် ဘုရားအလောင်းတော်သည်။ ဟိမ၀န္တာ တောကြီး၌ ကြံအင်လက္ခဏာတော်များနှင့် ပြည့်စုံသည့် ဆင်ဖြူတော် ဖြစ်နေလေသည်။
အလောင်းတော်ဆင်မင်း၏ မိခင်ဆင်မကြီးသည် အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်ကာ မျက်စိမမြင်ရှာပေ။ ထိုကြောင့် ဆင်မင်းသည် တောင်ခြေရှိ ပဒုမ္မာကြာတောကြီးကို မှီ၍ အမိကိုလုပ်ကျွေး ပြုစုနေရှာသည်။ တစ်နေ့၌ တောထဲ တွင် မျက်စိလည်နေသည့် ဗာရာဏသီပြည်သား မုဆိုးတစ်ဦး ငိုကြွေး မြည်တမ်းနေသည်ကို ကြားရသဖြင့် အလောင်းတော် ဆင်မင်းက သူ၏ကျောကုန်းပေါ် တင်၍ လူသွားလမ်းပေါ် ပို့ဆောင်ကာ ကူညီပေးလိုက်လေသည်။
ထိုမုဆိုး ဗာရာဏသီပြည် ပြန်ရောက်ချိန်တွင် ဘုရင်မင်းကြီး၏ မင်္ဂလာဆင်တော် သေဆုံးချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ ဤသတင်းစကားကို ကြားသိရသည့် မုဆိုးက ဘုရင်မင်းကြီးထံတော်ပါးမှ ဆုတော် လာဘ်တော်များ ရလိုသဖြင့် သူ့အသက်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့သည့် ကျေးဇူးတရားကိုပင် မထောက်ထားတော့ဘဲ နန်းတော်ကို သွားရောက်ကာ ဆင်လိမ္မာတစ်စီး ဟိမ၀န္တာ တောနက်ကြီးထဲ တွေ့ခဲ့ကြောင်း၊ လူနှင့် အလွန် ရင်းနှီးကြောင်း သံတော်ဦး တင်လေသည်။ ထိုအခါဘုရင်းမင်းကြီးက ထိုဆင်ကို ဖမ်းဆီးကာ ခေါ်ဆောင်နိုင်ရန် ဆင်ဆရာနှင့် အဖွဲ့ကို ထိုမုဆိုးထံ အပ်နှံလေသည်။
အလောင်းတော်ဆင်မင်းက သူလမ်းပြကယ်တင်ပေးခဲ့သည့် မုဆိုးဦးဆောင်သည့် လူစုလူဝေးကို မြင်ရ စဉ်သူ၏ နှာမောင်းဖြင့် ကစဉ့်ကလျား လွင့်စင်သွားအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းပါသော်လည်း မိမိသီလ ပျက်မည် ကို စိုးရိမ်သဖြင့် အမျက်မထွက်ဘဲ ဆင်ဆရာနှင့် မုဆိုးများပြုသမျှကို သည်းခံရှာလေသည်။
ဗာရာဏသီနေပြည်တော်ရောက်ချိန်၌ မင်းကြီးသည် အရသာကောင်းမွန်သည့် စားစရာများကို ဆင်မင်း အား ကျွေးစေသည်။ ဆင်မင်းက မစား။ မင်းကြီးကစားရန် တိုက်တွန်းသောအခါ “မင်းကြီး စောင့်ရှောက် သူမရှိ၍ အထီးကျန်နေရစ်ခဲ့သော မျက်မမြင်မိခင်အိုသည် စဏ္ဍောရဏတောင်သို့ သွားစဉ် သစ်ငုတ်များ တိုက်မိလေ တော့မည်”ဟု ဆိုလိုက်သည်။ ထိုအကြောင်းကို သိလိုက်ရသောအခါ မင်းကြီးသည် ဆင်မင်းအား ပြန်လွှတ် ပေးရန် အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
ဆင်မင်းသည် မင်ကြီးအား တရာဟောပြီးနောက် မိခင်အိုရှိရာသို့ ပြန်လာပြီး ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံး အစာ မစားရသော မိခင်ကြီးအား ကြာစွယ်ကြာရင်းများကို ဦးစွာစားစေပါသည်။ မိခင်ကွယ်လွန်သောအခါ ကာရဏ္ဍက မည်သော သင်္ခမ်းကျောင်းမှ ရသေ့ (၅၀၀) တို့အား ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်များကို ပြုစုရင်း အသက်ထက်ဆုံးနေ သွားခဲ့သည်။ ဇာတ်ပေါင်းသော် မင်းကြီးက အရှင်အာနန္ဒာ၊ မုဆိုးက အရှင်ဒေ၀ဒတ်၊ ဆင်ဆရာက အရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ မယ်တော်ဆင်က မယ်တော်မာယာ၊ ဆင်မင်းက ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်တည်း။
“အနုရက္ခိံ မမ သီလံ ၊ နာရက္ခိံ မမ ဇီဝိတံ
သဗ္ဗညုတံ ပိယံ မယှံ ၊ တသ္မာ သီလာ နုရက္ခိသာ”
ငါသည် ငါ၏ သီလကို စောင့်ရှောက်ခဲ့၏။ ငါ၏အသက်ကို မစောင့်ရှောက်ခဲ့ချေ။
ငါသည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့် သီလကိုအသက်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ (ကျမ်းညွှန်း-ဇာတကပါဠိ)
၃၃ ။ ကာမ၀စရကုသိုလ်နှင့် မဂ္ဂင်ထိုက်သည့် ကုသိုလ်
ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားနေသူ၊ တရားစာပေကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှု လေ့လာ မှတ်သားနေသူများသည် ကုသိုလ် အလုပ်ကို လုပ်နေသဖြင့် မိစ္ဆာကမ္မန္တကိုပယ်ပြီး ဖြစ်နေပါသည်။ မိစ္ဆာဝါစာနှင့် မိစ္ဆာအာဇီဝလည်း ပယ်ပြီး ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိစသည့် မဂ္ဂင် ၅-ပါးပါဝင် နေပါသည်။
တစ်ဖန် သီလကို အထူးမဆောက်တည်ဘဲ မိဘကို ပြုစုခြင်း၊ သားသမီးကို မေတ္တာဖြင့် စောင့်ရှောက်ခြင်း ရပ်ရေးရွာရေး ပရဟတိတ လုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းစသော ကာမ၀စရကုသိုလ်ပြုရာတွင်မူ ထို ၀ိရတီ စေတသိက် မပါဝင်သဖြင့် သမ္မာဝါစာ သမ္မာကမ္မန္တ သမ္မာအာဇီဝ ဖြစ်ပြီ သီလပြည့်စုံသည်ဟု မဆိုရပေ။ (ညွှန်း မိုးကုတ်ဝိနိစ္ဆယ နှာ- ၁၂၄)
မကြားဘူးကြား၊ ကြားဖူးစင်ကြယ်၊ ယုံမှားဖွယ်ပျောက်၊ အယူဖြောင့်သူ၊ စိတ်ကြည်ဖြူ၊ တရားနာကျိုး ငါးပါးတည်း။
၃၅။ သမ္မာဝါယာမ =သမ္မပ္ပဓာန် ၄ ပါး = Right effort
– သမ္မာဝါယာမဟူသည် အဘယ်နည်း ?
 အနုပ္ပန္နာနံ ပါပကာနံ အနုပ္ပါဒါယ ၀ါယာမော။
မိမိသန္တာန်မှာ မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ အကုသိုလ်တရားတွေကို မဖြစ်အောင် အားထုတ်မယ်။
 ဥပ္ပန္နာနံ ပါပကာနံ ပဟာနာယ ၀ါယာမော။
မိမိသန္တာန်မှာ ဖြစ်ဖူးတဲ့ အကုသိုလ်တရားတွေကို ပယ်နိုင်အောင် အားထုတ်မယ်။
 အနုပ္ပန္နာနံ ကုသလာနံ ဥပ္ပါဒါယ ၀ါယာမော။
မိမိသန္တာန်မှာ မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာရအာင် အားထုတ်မယ်။
 ဥပ္ပန္နာနံ ကုသလာနံ ဘိယျောဘာဝါယ ၀ါယာမော။
မိမိသန္တာန်မှာ ဖြစ်ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေကို လွန်စွာ တိုးပွားလာအောင် အားထုတ်မယ်။
ပြုခဲ့မိပြီး အကုသိုလ်ကို ၊ ပြန်ပြောင်းတွေးထင် မနေရပေ
ပူလောင်စေသည့် အကုသိုလ်မျိုး၊မပြုလုပ်ဘဲ နေကြလေ။ ။
ပြုခဲ့မိပြီး ကုသိုလ်စုကို ၊ ပြန်ပြောင်းတွေးထင် နှလုံးသွင်းလေ၊
မပြုသေးသည့် ကုသိုလ်စုကို၊ များများ ဖြည့်ကျင့်ပြုပါလေ။ ။
ကျမ်းညွှန်း – သဒ္ဓမ္မရံသီဆရာတော် ၂၆၂
၃၆။ ၀ိပဿနာ အားထုတ်နေသည့်ယောဂီများ မှတ်ရန်ဆယ်တစ်တန်
တွင်း ပြင် ဝေး နီး၊ ကြမ်း နု ကောင်း ညံ့ ၊တိတ် နာဂတ် ပစ္စုပ္ပန်၊ မှတ်ရန် ဆယ့်တစ်တန်
အတီတာ နာဂတ ပစ္စုပ္ပန္နံ ၊ အဇ္ဇတ္တံ ၀ါ ဗဟိဒ္ဓါ ၀ါ
သြဠာရိကံ ၀ါ သုခုမံ ၀ါ ဟီနံ ၀ါ ပဏီတံ ၀ါ ယံ ဒူရေ သန္တိကေ ၀ါ …..ဖြစ်စေ
၃၇။ ဤသာသနာတော်သည် ရှေးဘုန်းရှေးကံ အသိဉာဏ် နှင့် သဒ္ဓါတရားရှိသူတို့အတွက်သာ
သာသနံ ဘဂဝန္တဿ ၊ ဘဂဝန္တာဝ နာယကာ။
ပူဇကာ ဉာဏဝန္တာဝ ၊ သဒ္ဓါဝန္တာဝ ပဂ္ဂဟာ။
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်ကို ရှေးဘုန်း ရှေးကံရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသာ ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုနိုင်ကြပေသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်ကို အသိဉာဏ် ပညာရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသာ မြတ်နှိုးကော်ရော် ပူဇော်နိုင်ကြပေသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်ကို သဒ္ဓါတရားရှိကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသာ အားပေးပင့်ထောက် ချီးမြှောက်နိုင်ကြပေသည်။ ( ညွှန်း- ရွှေဟင်္သာဆရာတော် နှာ -၁၉၄)
၁၈- မဂ်ဂပစ်စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (7 of 8) pyidaungsu – unicode
၂၉။ ဂါထာ သုံးပုဒျအတှကျ ဆောငျပုဒျ
(၁) လမျးဖွောငျ့မညျတှငျ၊ ထိုမဂျပငျ၊ ရပျခှငျဘေးမဲ့ နိဗ်ဗာနျပါ။
(၂) လုံ့လနှဈလီ၊ ဘီးတပျသညျ၊ မမွညျရထား ထိုမဂျပါ။
(၃) ရှကျကွောကျနှဈတနျ၊ နောကျမှီခံ၊ ကာရံ အမှတျသတိပါ။
(၄) ဝိပသျရှသှေ့ား၊ မဂျဉာဏျကား၊ ရထားမောငျးသူ ဆိုရပါ။
(၅) ဤလိုရထား၊ ရှိသူမြား ယောကျြား မိနျးမ လူတိုငျးမှာ။
(၆) မဂ်ဂငျယာဉျကွီး၊ ငွိမျ့ငွိမျ့စီး၊ အပွီးနိဗ်ဗာနျ ဆိုကျရောကျပါ။
အဲဒီ ဂါထာ ၃-ပုဒျတရားကို ဟောပွီးတော့ သစ်စာလေးပါးကိုလညျး ပွတျောမူပါသေးတယျတဲ့။ အဲဒီ သစ်စာလေးပါးသိပုံကိုတော့ မဂ်ဂသစ်စာပိုငျးကမြှ ထပျပွီးပွောရမယျ။ သမဏနတျသားဟာ အဲဒီ တရားကိုနာရငျး ရှေးဘဝက သူနှလုံးသှငျးခဲ့တဲ့တရားကို ပွနျပွီးနှလုံးသှငျးတယျ။ ရဟနျးဘဝတုနျးက အပွငျးအထနျ ကွာမွငျ့စှာ နှလုံးသှငျးအားထုတျလို့ တရားထူးကို မရနိုငျခဲ့ပမေယျ့ နတျဘဝကတြော့ နတျရုပျတှကေ သနျ့ရှငျးစငျကွယျတဲ့ အတှကျ တခဏခငျြးပဲ ဝိပဿနာဉာဏျတှေ အစဉျအတိုငျးတကျ ပွီးတော့ သောတာပတ်တိမဂျဖိုလျဖွငျ့ နိဗ်ဗာနျကို မကျြမှောကျပွုပွီး သောတာပနျ ဖွဈသှားပါသတဲ့။ (သံ-ဋ်ဌ၊ ပ-၈၀-၈၃)
ဒီ သမဏနတျသားဝတ်ထုမှာ သိစလေိုရငျးကတော့ ဝိပဿနာအလုပျကို အပွငျးအထနျ အားထုတျ နသေျောလညျး တဏှာကငျးစနေိုငျတဲ့ အရိယမဂျဉာဏျကို မရသေးတဲ့အတှကျ သသေညျ၏အခွားမဲ့မှာ သမုဒယ သစ်စာဆိုတဲ့ တဏှာက နတျဘဝကို ဖွဈစတေယျဆိုတာ သိစလေိုရငျးပါပဲ။ ဒိပွငျ ဒီဝတ်ထုထဲမှာ မဂ်ဂငျရှဈပါး ပှားစပေုံနှငျ့ နတျဘဝကတြော့ အလှယျတကူနဲ့ တရားထူးရသှားပုံဟာလညျး အထူးသတိ ပွုဖို့ရာပါပဲ။
ကမျြးညှနျး– မဟာစညျဆရာတျောကွီး၏ ဓမ်မစကွာတရာတျော
“ဇီဝိတံ ဗြာဓိကာလော စ ၊ ဒဟေ နိက်ခပေနံ ဂတိ” မသိနိုငျတာအမြားကွီး ရှိတယျ။
ကိုယျအသကျ ဇီဝိတ ဘယျလောကျနရေမလဲ – မသိပါ။
ဗြာဓိ ဘာရောဂါဖွဈလာမလဲ – မသိပါ။
ဒဟေ နိက်ခပေနံ ကိုယျရုပျကလာပျ စှနျ့ပဈမယျ့သုသာနျကဘယျဟာလဲ – မသိပါ။
လားရောကျရမယျ့ ဂတိ – မသိပါ။
၃၁။ သီလသညျ သမာဓိနှငျ့ပညာ ဖွဈရေး၌ ပဓာန
သာသနေ ကုလပုတ်တာနံယ ပတိဋ်ဌာ နတ်ထိ ယံ ဝိနာ၊
အာနိသံသပရိစ်ဆဒေံယ တဿ သီလဿ ကော ဝဒေ။
သာသနာတျော၌ ကောငျးကြိုးလိုလား အမြိုးသား အမြိုးသမီးတို့အတှကျ သမာဓိနှငျ့ပညာ ဖွဈထှနျးရေး၌ သီလကို ကွဉျဖယျထား၍မဖွဈ၊ သီလသညျ သမာဓိ ပညာ ဖွဈပျေါရေး၌ အခွခေံ ပဓာနထောကျတညျရာ ဖွဈသညျ။ (ညှနျး ဝိသုဒ်ဓမဂျ တှဲ-၁ နှာ ၁၀)
မွတျစှာဘုရားရှငျသညျ မိဘကို လုပျကြှေးသညျ့ မထရျေတဈပါးကို အကွောငျးပွု၍ ဤဇာတျတျောကို ဟောတျောမူပါသညျ။ ဗာရာဏသီပွညျ၌ဗွဟ်မဒတျမငျးကွီးမငျးပွုစဉျ ဘုရားအလောငျးတျောသညျ။ ဟိမဝန်တာ တောကွီး၌ ကွံအငျလက်ခဏာတျောမြားနှငျ့ ပွညျ့စုံသညျ့ ဆငျဖွူတျော ဖွဈနလေသေညျ။
အလောငျးတျောဆငျမငျး၏ မိခငျဆငျမကွီးသညျ အိုမငျးမစှမျးဖွဈကာ မကျြစိမမွငျရှာပေ။ ထိုကွောငျ့ ဆငျမငျးသညျ တောငျခွရှေိ ပဒုမ်မာကွာတောကွီးကို မှီ၍ အမိကိုလုပျကြှေး ပွုစုနရှောသညျ။ တဈနေ့၌ တောထဲ တှငျ မကျြစိလညျနသေညျ့ ဗာရာဏသီပွညျသား မုဆိုးတဈဦး ငိုကွှေး မွညျတမျးနသေညျကို ကွားရသဖွငျ့ အလောငျးတျော ဆငျမငျးက သူ၏ကြောကုနျးပျေါ တငျ၍ လူသှားလမျးပျေါ ပို့ဆောငျကာ ကူညီပေးလိုကျလသေညျ။
ထိုမုဆိုး ဗာရာဏသီပွညျ ပွနျရောကျခြိနျတှငျ ဘုရငျမငျးကွီး၏ မင်ျဂလာဆငျတျော သဆေုံးခြိနျနှငျ့ တိုကျဆိုငျနပေါသညျ။ ဤသတငျးစကားကို ကွားသိရသညျ့ မုဆိုးက ဘုရငျမငျးကွီးထံတျောပါးမှ ဆုတျော လာဘျတျောမြား ရလိုသဖွငျ့ သူ့အသကျကို ကယျတငျပေးခဲ့သညျ့ ကြေးဇူးတရားကိုပငျ မထောကျထားတော့ဘဲ နနျးတျောကို သှားရောကျကာ ဆငျလိမ်မာတဈစီး ဟိမဝန်တာ တောနကျကွီးထဲ တှခေဲ့ကွောငျး၊ လူနှငျ့ အလှနျ ရငျးနှီးကွောငျး သံတျောဦး တငျလသေညျ။ ထိုအခါဘုရငျးမငျးကွီးက ထိုဆငျကို ဖမျးဆီးကာ ချေါဆောငျနိုငျရနျ ဆငျဆရာနှငျ့ အဖှဲ့ကို ထိုမုဆိုးထံ အပျနှံလသေညျ။
အလောငျးတျောဆငျမငျးက သူလမျးပွကယျတငျပေးခဲ့သညျ့ မုဆိုးဦးဆောငျသညျ့ လူစုလူဝေးကို မွငျရ စဉျသူ၏ နှာမောငျးဖွငျ့ ကစဉျ့ကလြား လှငျ့စငျသှားအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျစှမျးပါသျောလညျး မိမိသီလ ပကျြမညျ ကို စိုးရိမျသဖွငျ့ အမကျြမထှကျဘဲ ဆငျဆရာနှငျ့ မုဆိုးမြားပွုသမြှကို သညျးခံရှာလသေညျ။
ဗာရာဏသီနပွေညျတျောရောကျခြိနျ၌ မငျးကွီးသညျ အရသာကောငျးမှနျသညျ့ စားစရာမြားကို ဆငျမငျး အား ကြှေးစသေညျ။ ဆငျမငျးက မစား။ မငျးကွီးကစားရနျ တိုကျတှနျးသောအခါ “မငျးကွီး စောငျ့ရှောကျ သူမရှိ၍ အထီးကနျြနရေဈခဲ့သော မကျြမမွငျမိခငျအိုသညျ စဏ်ဍောရဏတောငျသို့ သှားစဉျ သဈငုတျမြား တိုကျမိလေ တော့မညျ”ဟု ဆိုလိုကျသညျ။ ထိုအကွောငျးကို သိလိုကျရသောအခါ မငျးကွီးသညျ ဆငျမငျးအား ပွနျလှတျ ပေးရနျ အမိနျ့ပေးလိုကျသညျ။
ဆငျမငျးသညျ မငျကွီးအား တရာဟောပွီးနောကျ မိခငျအိုရှိရာသို့ ပွနျလာပွီး ခုနှဈရကျပတျလုံး အစာ မစားရသော မိခငျကွီးအား ကွာစှယျကွာရငျးမြားကို ဦးစှာစားစပေါသညျ။ မိခငျကှယျလှနျသောအခါ ကာရဏ်ဍက မညျသော သင်ျခမျးကြောငျးမှ ရသေ့ (၅၀၀) တို့အား ဝတျကွီးဝတျငယျမြားကို ပွုစုရငျး အသကျထကျဆုံးနေ သှားခဲ့သညျ။ ဇာတျပေါငျးသျော မငျးကွီးက အရှငျအာနန်ဒာ၊ မုဆိုးက အရှငျဒဝေဒတျ၊ ဆငျဆရာက အရှငျ သာရိပုတ်တရာ၊ မယျတျောဆငျက မယျတျောမာယာ၊ ဆငျမငျးက ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားသခငျတညျး။
“အနုရက်ခိံ မမ သီလံ ၊ နာရက်ခိံ မမ ဇီဝိတံ
သဗ်ဗညုတံ ပိယံ မယှံ ၊ တသ်မာ သီလာ နုရက်ခိသာ”
ငါသညျ ငါ၏ သီလကို စောငျ့ရှောကျခဲ့၏။ ငါ၏အသကျကို မစောငျ့ရှောကျခဲ့ခြေ။
ငါသညျ သဗ်ဗညုတဉာဏျတျောကွီးကို ခဈြမွတျနိုးသောကွောငျ့ သီလကိုအသကျပေးပွီး စောငျ့ရှောကျခဲ့ခွငျး ဖွဈ၏။ (ကမျြးညှနျး-ဇာတကပါဠိ)
၃၃ ။ ကာမဝစရကုသိုလျနှငျ့ မဂ်ဂငျထိုကျသညျ့ ကုသိုလျ
ဘုရားဂုဏျတျောပှားနသေူ၊ တရားစာပကေို စိတျဝငျတစား ဖတျရှု လလေ့ာ မှတျသားနသေူမြားသညျ ကုသိုလျ အလုပျကို လုပျနသေဖွငျ့ မိစ်ဆာကမ်မန်တကိုပယျပွီး ဖွဈနပေါသညျ။ မိစ်ဆာဝါစာနှငျ့ မိစ်ဆာအာဇီဝလညျး ပယျပွီး ဖွဈနပေါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သမ်မာဒိဋ်ဌိစသညျ့ မဂ်ဂငျ ၅-ပါးပါဝငျ နပေါသညျ။
တဈဖနျ သီလကို အထူးမဆောကျတညျဘဲ မိဘကို ပွုစုခွငျး၊ သားသမီးကို မတ်ေတာဖွငျ့ စောငျ့ရှောကျခွငျး ရပျရေးရှာရေး ပရဟတိတ လုပျငနျးတို့ကို ဆောငျရှကျခွငျးစသော ကာမဝစရကုသိုလျပွုရာတှငျမူ ထို ဝိရတီ စတေသိကျ မပါဝငျသဖွငျ့ သမ်မာဝါစာ သမ်မာကမ်မန်တ သမ်မာအာဇီဝ ဖွဈပွီ သီလပွညျ့စုံသညျဟု မဆိုရပေ။ (ညှနျး မိုးကုတျဝိနိစ်ဆယ နှာ- ၁၂၄)
မကွားဘူးကွား၊ ကွားဖူးစငျကွယျ၊ ယုံမှားဖှယျပြောကျ၊ အယူဖွောငျ့သူ၊ စိတျကွညျဖွူ၊ တရားနာကြိုး ငါးပါးတညျး။
၃၅။ သမ်မာဝါယာမ =သမ်မပ်ပဓာနျ ၄ ပါး = Right effort
– သမ်မာဝါယာမဟူသညျ အဘယျနညျး ?
 အနုပ်ပန်နာနံ ပါပကာနံ အနုပ်ပါဒါယ ဝါယာမော။
မိမိသန်တာနျမှာ မဖွဈဖူးသေးတဲ့ အကုသိုလျတရားတှကေို မဖွဈအောငျ အားထုတျမယျ။
 ဥပ်ပန်နာနံ ပါပကာနံ ပဟာနာယ ဝါယာမော။
မိမိသန်တာနျမှာ ဖွဈဖူးတဲ့ အကုသိုလျတရားတှကေို ပယျနိုငျအောငျ အားထုတျမယျ။
 အနုပ်ပန်နာနံ ကုသလာနံ ဥပ်ပါဒါယ ဝါယာမော။
မိမိသန်တာနျမှာ မဖွဈဖူးသေးတဲ့ ကုသိုလျတရားတှကေို ဖွဈပျေါလာရအာငျ အားထုတျမယျ။
 ဥပ်ပန်နာနံ ကုသလာနံ ဘိယြောဘာဝါယ ဝါယာမော။
မိမိသန်တာနျမှာ ဖွဈဖူးတဲ့ ကုသိုလျတရားတှကေို လှနျစှာ တိုးပှားလာအောငျ အားထုတျမယျ။
ပွုခဲ့မိပွီး အကုသိုလျကို ၊ ပွနျပွောငျးတှေးထငျ မနရေပေ
ပူလောငျစသေညျ့ အကုသိုလျမြိုး၊မပွုလုပျဘဲ နကွေလေ။ ။
ပွုခဲ့မိပွီး ကုသိုလျစုကို ၊ ပွနျပွောငျးတှေးထငျ နှလုံးသှငျးလေ၊
မပွုသေးသညျ့ ကုသိုလျစုကို၊ မြားမြား ဖွညျ့ကငျြ့ပွုပါလေ။ ။
ကမျြးညှနျး – သဒ်ဓမ်မရံသီဆရာတျော ၂၆၂
၃၆။ ဝိပဿနာ အားထုတျနသေညျ့ယောဂီမြား မှတျရနျဆယျတဈတနျ
တှငျး ပွငျ ဝေး နီး၊ ကွမျး နု ကောငျး ညံ့ ၊တိတျ နာဂတျ ပစ်စုပ်ပနျ၊ မှတျရနျ ဆယျ့တဈတနျ
အတီတာ နာဂတ ပစ်စုပ်ပန်နံ ၊ အဇ်ဇတ်တံ ဝါ ဗဟိဒ်ဓါ ဝါ
သွဠာရိကံ ဝါ သုခုမံ ဝါ ဟီနံ ဝါ ပဏီတံ ဝါ ယံ ဒူရေ သန်တိကေ ဝါ …..ဖွဈစေ
၃၇။ ဤသာသနာတျောသညျ ရှေးဘုနျးရှေးကံ အသိဉာဏျ နှငျ့ သဒ်ဓါတရားရှိသူတို့အတှကျသာ
သာသနံ ဘဂဝန်တဿ ၊ ဘဂဝန်တာဝ နာယကာ။
ပူဇကာ ဉာဏဝန်တာဝ ၊ သဒ်ဓါဝန်တာဝ ပဂ်ဂဟာ။
မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ သာသနာတျောကို ရှေးဘုနျး ရှေးကံရှိသညျ့ပုဂ်ဂိုလျတို့ကသာ ဦးဆောငျဦးရှကျ ပွုနိုငျကွပသေညျ။
မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ သာသနာတျောကို အသိဉာဏျ ပညာရှိသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျတို့ကသာ မွတျနှိုးကျောရျော ပူဇျောနိုငျကွပသေညျ။
မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ သာသနာတျောကို သဒ်ဓါတရားရှိကွသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျတို့ကသာ အားပေးပငျ့ထောကျ ခြီးမွှောကျနိုငျကွပသေညျ။ ( ညှနျး- ရှဟေင်ျသာဆရာတျော နှာ -၁၉၄)